Daadad ku soo rogmaday tuulada Gosol ee gobolka Mudug oo hal qof la tagay, burburriyeyna dhimayaashii tuuladaasi. – Radio Daljir
Maajo 13, 2010 12:00 b 0
Gosol, May 13 – Wararka ka imaanaya tuulada Gosol oo ka tirsan degmada Xarfo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya halkaasi in ay ku soo rogmadeen daadad xooggan oo gaystay khasaarooyi nafeed iyo mid hantiyeedba.
Tuuladan oo ku beegan dhinaca Bari ee degmada Xarfo, ayaa waxaa saaka aroortii ku soo rogmaday mawjado biya ah oo aad u xooggan badan kuwaasi oo ka soo jabay dhulka Nugaasha ah oo maalmihii ugu danbeeyey ay ku da’ayeen roobab mihigaan ah, waxaana daadkaasi oo cagta mariyey dhammaanba dhismayaashii tuuladaasi iyagoo hal qofna ay la tageen.
Dadkii degganaa tuuladaas ayaa dhammaantoodba u cararay dhulka taagga ah ee aysan biyuhu gaari karin iyo buuraha ku yaalla meelaha u dhaw tuulada, iyagoo gabi ahaanba ka cararay wixii hanti ay haysteen.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad, oo u warramay idaacadda Daljir ayaa sheegay dadkii tuuladaasi degganaa haatan in ay fadhiyaan meel cidla iyagoon hooy iyo hanti midna haysan, waxaana guddoomiyuhu sheegay dadkaasi in ay u baahan yihiin caawimaad deg deg ah.
Guddoomiyuhu waxaa maamulka Puntland iyo hay’adaha gargaarkaba uu ka codsaday in si dhakhso ah dadkaasi loo caawiyo iyadoo maanta ay dhankasta taakulo uga baahan yihiin.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Xarfo oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha degmadu ayaa la tilmaamayaa in ay halkaasi gaareen, waxaana warku uu intaasi raacinayaa tuulada Gosol in aysan lahayn waddooyin fiican oo suurto-galin kara in si deg deg ah halkaasi loo gaaro.
Daadadkaan ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan deegaannada Puntland ay ka bilawdeen roobabkii gu’gu, kuwaasi oo maasheeyey dhul badan oo miyi iyo magaalooyinba iskugu jira, waxaana hadda ka hor degmada Qardho ay ka gaysteen khasaarooyin iskugu jira dhimasho hal ruux iyo burbur hantiyeed.